Tournoi Pangalanes 2018 : Foana noho ny toetr’andro ireo lalao famaranana -
AccueilVaovao SamihafaTournoi Pangalanes 2018 : Foana noho ny toetr’andro ireo lalao famaranana
Tournoi Pangalanes 2018 : Foana noho ny toetr’andro ireo lalao famaranana
05/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tsy nampoizina. Voatery nofoanana tampoka noho ny orana nirotsaka tsy an-kijanona entin’ilay andro ratsy Dumazile ireo lalao famaranana roa, eo amin’ny taranja basikety sy beach soccer, amin’ny Tournoi Pangalanes 2018. Fifaninanana eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, notontosaina tao Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany, ny 24 febroary- 4 marsa teo.
Tsiahivina fa ny sabotsy 3 marsa teo no tokony ho nizoran’ny lalao famaranana teo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A, izay hifanandrinan’ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena, GNBC, sy ny ekipan’ny miaramila, Cosfa. Tsy tanteraka izany, ary saika notanterahina omaly alahady tolakandro saingy, tsy nitohy hatrany ny rotsak’orana. Teo amin’ny lalao manasa-dalana, dia tsy nampoizina ny vokatra. Tsy tafavoaka nanoloana ny Cosfa ny ASCB Boeny. Resy tamin’ny moka fohy 71 noho 69 mantsy ireo ekipan’i Mahajanga tamin’izany. Torak’ izany koa ny teo amin’ny manasa-dalana ilany, resin’ny GNBC Vakinankaratra tamin’ny isa 78 noho 63 ny Ascut Atsinanana.
Marihina mantsy fa teo amin’ny Kianjan’ny Demokrasia Manakara no nanatanterahina ireo lalao rehetra teo amin’ny taranja basikety. Lalao notanterahina tamin’ny andro alina izany.
Toraka izany koa ny teo amin’ny beach soccer, voatery nofoanana ihany koa ny lalao famaranana izay tokony hikatrohan’i Morondava sy Toliara. Tsiahivina fa nandavo an’i Mahajanga, tompondakan’i Madagasikara, tamin’ny isa 6 noho 2 teo amin’ny lalao manasa-dalana i Morondava. I Toliara kosa nanilika an’i Manakara, mpampiantrano ny hetsika, tamin’ny isa mazava, 7 noho 4.
Ankoatra izay dia notanterahina omaly hariva kosa ny lanonana fanakatonana ny hetsika Tournoi Pangalanes. Natolotra ho an’i Manakara kosa ny amboaran’ny Fair-play. Marihina fa avy tamin’ny Filoham-pirenena avokoa ireo amboara rehetra amin’ny Tournoi Pangalanes 2018.
Nambaran’ny mpikarakara, ny Kolonely Nicolas Jean-Patrick, fa tratra ny tanjona tamin’ny fikarakarana iny fifaninanana ara-panatanjahantena natao tao Manakara iny. Iny hetsika iny ihany koa raha ny nambarany hatrany, dia nahafahana nitondra ireo mpilalao kalaza mba hanome ohatra ho an’ireo tanora amin’iny Faritra Vatovavy Fitovinany iny eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena.
Tsy nohadinoin’ny mpikarakara ihany koa ny nanolotra fisaorana ireo mpiara-miasa tamin’izy ireo, toa ny Hotel La Résidence Manakara, izay nampiantrano ireo manam-pahefana sy nampisakafo ireo delegasiona rehetra. Teo ihany koa ny orinasa Telma, sns.